Maxaa Kasoo Kordhay kulamadii ka socday Dhuusamareeb – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Maxaa Kasoo Kordhay kulamadii ka socday Dhuusamareeb
Magalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud,waxaa Maalintii saddexaad ku sugan Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye,iyaga oo kulamo la qaadanaya Madaxda ugu sareysa Maamulka Galmudug.
Kulamada oo aan weli wax natiijo ah kasoo bixi`n ayaa ka socda Magalada dhuusamareeb,waxaana la sheegay in inta badan wadahadallada ay isugu soo dhawaadeen Wafdiga Wasiirka iyo Madaxdii ahlusunna ee ku biirtay Maamulka Galmudug, hayeeshee Madaxweyne Xaaf uusan weli ka qeyb gelin kulamada.
Saacadihii la soo dhaafay waxaa socday dadaalo ay wadeen Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo dhuusamareeb ku sugan,kuwaas oo isku dayaya in Madaxwyene Xaaf uu wadahadal la galo Dowladda Federaalka,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu ogolaaday wadahadalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligaan wada qorsho ku aadan in Bisha July ee soo socota in deegaanada Galmudug ay doorasho ka dhacdo,balse taasi uu diiday Madaxweyne Xaaf,waxaana taasi ay sii xoojisay khilaafka u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Shalay Magalada Gaalkacyo waxaa ka tegay Gaadiid nooca dagaalka ah iyo Ciidamo la socda,kuwaas oo doonayay in Madaxweynaha Galmudug ay kasoo wadaan Magalada Dhuusamareeb,hayeeshee loo diiday inay galaan Magaaladaas,waxaana weli socda kulamada lagu soo afjarayo khilaafka si ay doorasho uga dhacdo Galmudug.
Maxaa Kasoo Kordhay kulamadii ka socday Dhuusamareeb added by admin on 23/06/2019